Ejiji ndị Nicaraguan | Akụkọ njem
Mariela Carril | | omenala, Nicaragua
Uwe ejiji nke obodo ọ bụla ma ọ bụ mpaghara ọ bụla n'ime obodo na -agwa anyị gbasara ókèala, omenala na omenala ya. Mgbe mmadụ na -ekwu maka Latin America, uwe ndị a na -enweta agba na -enwu gbaa na ọ joyụ dị ukwuu.
Ezigbo ihe atụ bụ ụdị ejiji Nicaragua, obodo nwere ọtụtụ ọdịnala, ihu igwe na -ekpo oke ọkụ na ụdị ejiji ọdịnala mara mma nke ukwuu.
2 Ụdị ejiji Nicaragua
Republic of Nicaragua na -bụ Obodo Central America nke isi obodo ya bụ Managua. Ọ dị na mgbago mgbago mgbago ugwu, n'etiti akara akara na Tropic of Cancer, ma nwee mpaghara ihe dịka square kilomita 130.370. Ọ dị ka nke ahụ ọ bụ mba kachasị na Central America.
Ọtụtụ ndị dịrị ndụ tupu Columbian ebidola mpaghara a Mmeri Spanish na narị afọ nke XNUMX. Mgbe ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị gasịrị, mba ahụ meriri ya nnwere onwe na 1838. Ọ bụ obodo ebe okpomọkụ mara mma, nwere ọrụ mgbawa ugwu na ọdọ mmiri ndị mara mma.
Ụdị ejiji Nicaragua
Dị ka ọ na-emekarị, Enweghị otu ejiji mana enwere ọtụtụ na ha niile mụrụ site n'aka mmemme na mmemme nke oge ndị ọzọ., ihe omume ndị mmadụ ji eji ejiji dị ukwuu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime egwu ndị a ka na -eme taa, ndị ọzọ furu efu n'oge adịghị anya. Ndị lanarịrị bụ akụkụ nke akụkọ akụkọ mba na ọtụtụ ụdị ejiji anyị ga -ahụ na -edo onwe ha n'okpuru ha.
Iji malite, anyị ga -ekwu maka ịgba egwu a maara dị ka Ndị Indita. Ọ bụ agba egwu nke ememme Masaya ọdịnala, ọ gbasara ọrụ ụmụ nwanyị ime obodo. Otu onye ma ọ bụ ọtụtụ ndị na -agba egwu, ma ndị amateurs ma ndị ọkachamara, gbara egwu a, ruo ụda egwu a maara dị ka «egwu nke inditas ». Ndị na -agba egwu a na -eyi a uwe ọcha niile, jiri akwa na -acha ọbara ọbara na -acha ọbara ọbara, fustán, ajị ajị ajị agba ya ma jiri okooko osisi na nkata dị mma chọọ ya mma.
Ịgba egwu ọzọ na -ewu ewu bụ Ịgba egwu zopilote, nwa afọ nke oke osimiri South Pacific, Diriomo, Diriá na Masaya. Site n'egwu "Onye egwu ahụ nwụrụ", nke otu ndị philharmonic rụrụ, ndị na -agba egwu na -apụta n'igwe ma jiri nwayọ na -agagharị. Ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị nọ na mmegharị ha na-anọchite anya ọnwụ na ili agwa agwa ọkara a, nke e ji mara nnụnụ a na-eri ihe.
Ejiji ọdịnala nke uzu bụ, mgbe ahụ, nwa nwere nkpuchi nkpuchi, mgbe ụmụ nwanyị na -eyi uwe Uwe ọdịnala ndị mmadụ oroma, nwere okooko osisi na ntutu isi ya na akwa ojii.
Sitekwa na mpaghara Pacific, Masaya, bụ ejiji braid, mara mma nke ukwuu, nke ahụ bụkwa nke nwanyị ọ bụla na -agba egwu marimba na -eyi. Ọ bụghị na otu egwu ga -ada ụda, ọ bụrụhaala na ọ bụ marimba ị nwere ike iyi uwe a. Kedukwa ka ọ dị? Ọ bụ ihe a Uwe a na -enweta site na akwa ọrụ ụmụ nwanyị ma ọ bụ mestizo: ọ na -acha ọcha ma nwee ihe ịchọ mma na braids mara mma, a na -eyi akwa mkpuchi uhie ma ọ bụ oji na ụmụ nwanyị na -eyi braids na ifuru n'isi na ọla ntị mara mma na ntị.
Enwekwara uwe eji mara ya "Ejiji nke miscegenation", nwa afọ nke mpaghara Pacific nke Nicaragua. Enwere otu maka nwoke yana otu maka nwanyị ha dịkwa nke mmetụta Spanishna. Nwoke ahụ na-eyi uwe ogologo ọkpa, n'okpuru sọks na-acha ọcha, sneakers na pes, uwe elu na-acha ọcha nwere akwa nwere agba gbara ọchịchịrị nke ejiri sequins chọọ ya, yana okpu nwere afụ ọnụ n'ihu ya nke nwere ifuru uhie na ọtụtụ ibe mara mma.
Nwanyị ahụ, n'akụkụ nke ya, nwere uwe mwụda dị warara na nke agbagoro "Ekike ndị India mara mma", na -eji nku nku n'aka na okpu nku. Site n'ụdị uwe a, egwu a na -akpali agụụ mmekọahụ, na -atọ ụtọ, na -eme mbedo nke nwoke n'ebe nwanyị nọ, na -abụkarị otu nwanyị marimba: onye ọlụlụ dị ilu.
Na Fraịdee ikpeazụ nke Ọktoba, na Masaya, a na -eme ememme ndị nsọ nke San Jerónimo. Mgbe ahụ, ọtụtụ otu egwu ndị mmadụ nọ ebe a wee gbaa egwu Los Aguizotes, ịgba egwu na ọtụtụ ndị na -agba egwu yi uwe dị ka akụkọ ifo na akụkọ mgbe ochie nke akụkọ Nicaraguan.
Ekike ndị a dị mfe, ejiri akwa mee, katọn, nwere nnukwu ihe dị iche iche. Mgbe ahụ, ha na -enye nwanyị na -ebe ákwá, onye amoosu, onye ìsì, nna na -enweghị isi, ọnwụ, agadi nwanyị si n'ugwu, na ihe ndị ọzọ.
Ke edere edere mba na -egosi Ejiji onye oru ugbo ugwu onye na -enwu n'egwu nke dịkwa oke egwu. N'egwuregwu a, nwoke a na -eji egwu dị egwu, dị ka polka arafu nwanyị na -arụ ọrụ.
E nwere agwa abụọ, nwoke na nwanyị: nwanyị ahụ nwere uwe mwụda siri ike nke nwere uwe ogologo aka, ịchafụ dị n'úkwù ya na isi ọzọ, ọla ntị na ntị ya na aka ya. Nwoke ahụ, n'aka nke ya, na-eyi uwe elu na-acha ọcha ma ọ bụ na-enwu enwu, ogologo ogologo ọkpa ọcha, ogiri mmiri, okpu na ịchafụ n'olu.
Ejiji mestizo bụ uwe güipil. Ntọala na -achakarị ọcha, mana ọ nwekwara ike bụrụ oji. A na -eyi ya ịchafụ n'úkwù, okooko osisi n'isi na braids. Uwe elu nwere oghere anọ yiri ka ọ na -anọchite anya isi ihe anọ: otu n'ubu ọ bụla, otu na azụ, na otu n'obi.
Womenmụ nwanyị na -agba egwu enweghị akpụkpọ ụkwụ, mgbe ụfọdụ ha na -ebu fan aka, shawl. Nwoke ahụ yi uwe elu na traụza dị nnọọ mfe, nwere okpu pita. Ọ bụ n'ezie uwe na -ewu ewu.
Ọ bụrụ na enwere uwe mara mma, ọ bụ Ekike Vaquita, ụdị nke Managua. A mụrụ uwe a na mmemme ndị nsọ na -eche nche nke isi obodo Nicaragua, na usoro Santo Domingo. Ọ bụ uwe dịtụ iche n'ihi na o nwere nnukwu mgbanaka n'úkwù nke ejiri akwa mara mma chọọ ya mma dị ka uwe mwụda. A na -etinyekwa onyonyo ma ọ bụ eserese nwere isi ehi, ya mere la obere ehi, Na mpi.
Ndị a bụ ụfọdụ ụdị ejiji nke Nicaragua. Eziokwu bụ na mpaghara ọ bụla nke obodo nwere ihe atụ ya. Ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ụsọ oké osimiri Caribbean nke ndịda, anyị ga -ahụ mmekọrịta n'etiti ọdịbendị Afrịka na Caribbean, n'ịgba egwu palo de Mayo, dịka ọmụmaatụ, nwere oke agụụ, ebe ụmụ nwanyị taa na -eyi uwe mwụda dị mkpụmkpụ. huipil ma ọ bụ güipil, uwe elu nwanyị na -ewu ewu. Masaya bụ ngalaba ọzọ anyị kpọtụrụ aha ọtụtụ ugboro na ọtụtụ uwe anyị nyochara si ebe ahụ, mana mpaghara etiti na -enyekwa nke ha na nke ugwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Nicaragua » Ejiji ndị Nicaraguan